Rexuiz, Trepidaton iyo Smokin 'Qoryaha: 3 dheeri ah FPS Games for GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | | Aplicaciones, GNU / Linux
Maanta, waxaan ka hadli doonaa waxyaabo kale oo xiiso leh Ciyaaraha FPS, oo aan ku dari doono kuweena Liiska Ciyaaraha del Nooc FPS ah (Qofkii ugu horreeyay ee wax toogta), oo magacyadoodu kala yihiin Rexuiz, Trepidaton iyo Smokin 'Qoryaha.
Sida hoos looga hadlay, liistadu waa dheer tahay oo xiiso badan tahay. Intaa waxaa dheer, dhammaan cayaaraha la soo uruuriyay waxay u noqon karaan kuwo badan oo xiiso leh. Taasina waa sababta, sidaan horeyba u sheegnay munaasabadaha kale, waxaa jira a dalab weyn la heli karo de Ciyaaraha FPS waayo, Linux, oo aan la tirin kuwa noocyada kale ah.
Marka lagu daro maanta 3, waxaas oo dhan waa kuweenna Liiska Ciyaaraha FPS ee bilaashka ah iyo kuwa waddaniga ah ee Linux:
Haddii qof doonayo inuu waxbadan ka akhriyo mid kasta oo ka mid ah Ciyaaraha FPS ku xusan, waxaad sahamin kartaa qoraalkeena hore ee la xiriira hoos ku xusan, ka dib markaad dhameyso qoraalkan xaadirka ah:
1 Ciyaaraha FPS Dheeraad ah: Rexuiz, Trepidaton iyo Qoryaha 'Smokin'
1.3 Qoryaha Smokin
Ciyaaraha FPS Dheeraad ah: Rexuiz, Trepidaton iyo Qoryaha 'Smokin'
Laga soo bilaabo halkan furan FPS Game macluumaadka soo socda ayaa taagan:
Waa ciyaar khadka tooska ah oo bilaash ah (Free2Play), iyada oo aan macaamil gudaha ah iyo lacag qarsoon lagu dallacin.
Waxay u socotaa nooca hadda deggan, lambar 2.5.2-210206, oo la sii daayay maalmo ka hor.
Asal ahaan waa macmiil kale oo ka tirsan Nexuiz Classic oo leh casriyeyntii ugu dambeysay.
Waxaa si fudud loogu maamuli karaa kombiyuutarada ilaha yar.
Waxay bixisaa khibrad dagaal oo deg deg ah oo xiiso leh.
Waxaa ku jira qaabka ololaha ee Quake I.
Isaga mooyee degel rasmi ah, halkaas oo ay jiraan dukumiintiyo wanaagsan, shaashadda iyo fiidiyowyadeeda, waxaad booqan kartaa xiriiriyeyaasha soo socda Sourceforge y GitHub wixii macluumaad dheeraad ah.
Waa ciyaar ku saleysan mishiinka IOQuake3.
Ciyaarta waxaa ka mid ah waxyaabo badan: 21 heerarka ciyaartoy badan (khariidado), iswaafajinta Quake 3 iyo Star Trek Voyager Elite khariidadaha, cod dhawaaqeed asal ah oo leh 10 mowduuc oo asal ah, 7 qaababka ciyaarta iyo Codka taageerada IP-ga ee ciyaarta (VoIP).
Markii la aasaasay waxay ka bilaabatay Abriil 9, 2006, xubno ka socda bulshada ciyaaraha 'Star Trek Elite Force', iyadoo ujeedadu tahay in la dhiso ciyaar bilaw ah oo qof toogasho ku dhisan. Iyo inkasta oo waqtigaas aan mashruuca la dhammaystirin, haddana mashruucu weli wuu socdaa, oo nooca uu yahay 0.0.27, oo ku taariikhaysan 12-17-2019, ayaa loo heli karaa in la soo dejiyo.
Isaga mooyee degel rasmi ah, halkaas oo ay jiraan dukumiintiyo wanaagsan, shaashadda iyo fiidiyowyadeeda, waxaad booqan kartaa xiriiriyeyaasha soo socda GitHub y Dhul gariir wixii macluumaad dheeraad ah.
Waa ciyaar loo qaadan karo inay tahay wadar beddelid ah Quake III Arena oo laga keenay id Software.
Qoryaha loo yaqaan 'Smokin' Guns waxaa loogu talagalay inuu noqdo jilitaan dhab ahaan u eg jawiga weyn ee 'Old West' waxaana lagu sameeyay barnaamijka 'Software' Id Software's Quake III Arena.
Waxay ku dhalatay magaca Western Quake qiyaastii 2003. Waxaana asal ahaan soo saaray koox loo yaqaan Iron Claw Interactive. Sannadkii 2005-tii ciyaartu waxay u gudubtay gacanta kooxdii la odhan jiray "Qoryihii Siiqanaa" oo iyagu sannadkii 2008-kii bilaabay nooc madax-bannaan, isla magacaas. Xilligan qaabkeedii ugu dambeeyay ee xasilloon waa 1.1, oo ku taariikhaysan 2012.
Ciyaarta waxaa ka mid ah hub gebi ahaanba cusub oo lagu abuuray macluumaad taariikhi ah oo sax ah oo ku saabsan burburka, heerka dabka, waqtiga rarka, iyo kuwa kale ee muhiimka ah. Waxa kale oo ku jira noocyo cusub oo ciyaaro ah iyo khariidado ugu horreyn lagu dhiirrigeliyo filimada. Iyo muusigga muusigga iyo dhawaqyada loo waafajiyay xilligan, si loogu daro dareenka "muuqaalka qoryaha."
Waxay bixisaa nidaam dhaawac macquul ah oo leh meelo kala duwan (madaxa, laabta, qoorta, iwm.) Iyo burburka dhicitaanka iyadoo kuxiran dhererka. Noocyada cusub ee ciyaarta reer galbeedka ee loogu talagalay madadaalo badan: Bangiga dhaca iyo qaababka isdabajooga. Nidaam lacageed oo u oggolaanaya iibsashada qalabka lacag laga helo abaalmarinta iyo uruurinta. Isticmaal muuqaal adeegsade garaaf ah iyo HUD. Iyo horumarin kale oo yaryar si loo hagaajiyo ciyaarta iyo kordhinta baashaalka.
Su degel rasmi ah wuxuu hayaa dukumiinti duug ah, shaashadda shaashadda iyo fiidiyowyadeeda, laakiin waa buuggan y wiki aad ayey faa'iido u yeelan karaan, haddiiba ay dhacdo in qof doonayo inuu tijaabiyo.
Ugu dambeyntiina, iyo sida dheeriga ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso oo aad isku daydo mid kale oo xiiso leh Ciyaaraha FPS loo yaqaan «Xoriyad» taas oo ah ciyaar dhameystiran oo bilaash ah oo ku saleysan caddibaadda. Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda waa la jaan qaadi karaan wax ka beddelka ciyaarta ("mods") loo sameeyay ciyaarihii asalka ahaa caddibaadda, oo ay sameeyeen taageerayaasha iyo fanaaniinta caddibaadda tobannaan sano oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" Kuwan 3 Ciyaaraha FPS ugu yeedho «Rexuiz, Trepidaton y Smokin' Guns», oo aan ku darno kuwayaga «Liiska Ciyaaraha FPS ee bilaashka ah iyo bilaashka ah ee loogu talagalay Linux »; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Rexuiz, Trepidaton iyo Smokin 'Qoryaha: 3 Ciyaaraha FPS oo dheeri ah oo loogu talagalay GNU / Linux
Sailfish 4.0.1 waxay la timid dib u qaabeyn isdhaafsi ah, horumarin iyo wax badan
Kanonikalku wuxuu ka shaqeeyaa rakibe cusub oo Ubuntu ah sidoo kale wuxuu macsalaameynayaa Martin Wimpress